Alibaba သည် ADS အသစ် ၁ ဘီလီယံ ကို မှတ်ပုံ တင်ပြီး SoftBank သည် အစုရှယ်ယာ များ ရောင်းချ နိုင်သည် – Pandaily
Alibaba သည် ADS အသစ် ၁ ဘီလီယံ ကို မှတ်ပုံ တင်ပြီး SoftBank သည် အစုရှယ်ယာ များ ရောင်းချ နိုင်သည်
Feb 07, 2022, 15:58ညနေ 2022/02/07 22:30:18 Pandaily
Alibaba Group Holding Ltd. သည်အမေရိကန် အပ်ငွေ အစုရှယ်ယာ အသစ် ၁ ဘီလီယံ ကို မှတ်ပုံ တင်ပြီး SoftBank Group သည်၎င်း၏ အစုရှယ်ယာ အချို့ကို ရောင်းချ ရန်ရည်ရွယ် ထားကြောင်း အကြံပြု သည်Bloombergတနင်္လာနေ့ ။ SoftBank ကေတာ့ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘာမွ မွတ္ခ်က္ မေပး ေသးပါဘူး။
Alicia Yap အပါအ ၀ င် Citigroup မှ လေ့လာသုံးသပ် သူများက အစီရင်ခံစာ တစ်ခုတွင် SoftBank Japan သည် Alibaba ၏ IPO မတိုင်မီ ကုမ္ပဏီကို ထောက်ခံ ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာ အများစုသည် ADSS အဖြစ် မှတ်ပုံ တင်ထား ခြင်းမရှိပါ။ Citi ၏ တွက်ချက် မှုအရ SoftBank သည် Alibaba ၏ သာမန် ရှယ်ယာ ၅. ၃၉ ဘီလီယံ ကိုပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ADS ၆ ၇၃. ၇ သန်း နှင့်ညီမျှသည်။ ၂၄. ၈% နှင့်ညီမျှသည်။
Citi မှ လေ့လာသုံးသပ် သူများက Alibaba ၏ US Securities and Exchange Commission (SEC) သို့ တင်သွင်းသော စာရွက်စာတမ်း များသည် SEC တွင် မှတ်ပုံ တင်ထား ခြင်းမရှိသော အစုရှယ်ယာ ရှ င်များအား သူတို့၏ အစုရှယ်ယာ များကို ရောင်းချ ရန် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဖြစ်စေ လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ မှတ်ပုံတင် ခြင်းသည် ၀ န်ထမ်း ရှယ်ယာ မက်လုံး အစီအစဉ် များအတွက် အစုရှယ်ယာ အသစ်များ ထုတ် ပေးရန် ကုမ္ပဏီ၏ လိုအပ်ချက် များကိုလည်း ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်သည်။ Alibaba သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၌ IPO တစ်ခု ပြုလုပ် သောအခါ ADS ၂ ဘီလီယံ ခန့်ကို မှတ်ပုံ တင်ခဲ့သည်။
Masayoshi Son ၏ SoftBank သည် နည်းပညာ ကျဆင်း မှုနှင့်အတူ အစုစု ကုမ္ပဏီ များစွာ ၏တန်ဖိုး ကျဆင်း နေသဖြင့် မကြာသေးမီ လ များအတွင်း ဖိအား များ ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသည်။ Didi Global Inc ၊ One97 Communications Ltd နှင့် DoorDash Inc တို့အပါအ ၀ င် အစုရှယ်ယာ များ ၏တန်ဖိုး ကျဆင်း မှုနှင့်အတူ SoftBank ၏ရှယ်ယာ များသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် က၎င်း၏ အထွတ်အထိပ် မှ ၅၀% ခန့် ကျဆင်းခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Beijing Winter Olympics ကို Aliyun မှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာ သို့ ထုတ်လွှင့် မည်
အင်္ဂါနေ့က ရရှိ လာတဲ့ ဝင်ငွေ တွေကို ကြေညာ ခဲ့တဲ့ SoftBank ဟာ အရင် တုန်းကလည်း ပြန်လည် ဝယ်ယူ မှုတွေနဲ့ သူ့ရဲ့ ရှယ်ယာ တွေကို မြှင့်တင် ခဲ့ပါတယ်။ ယခုအချိန်အထိ Alibaba သည်၎င်း၏ တန်ဖိုး အရှိဆုံး ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
Alibaba ၏ ဟောင်ကောင် စတော့ရှယ်ယာ သည် ၄. ၆% ကျဆင်းခဲ့ပြီး SoftBank ၏ စတော့ရှယ်ယာ သည် တိုကျို တွင် ၅. ၄% မြင့်တက်ခဲ့သည်။
Industry Nov 29 နိုဝင်ဘာ 29, 2021
လာ ဇာ ဒါ အတြက္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလ်ံ ရန္ပံုေငြ ရရွိေရး ေဆြးေႏြးမႈ Alibaba ဆိုင္းငံ့
တရုတ် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီးအလီ ဘာ ဘာအေစာပိုင္းက ကုမၸဏီက ၎၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အီလက္ထ ေရာ နစ္ ကုန္သြယ္ေရး ပလက္ ေဖာင္း ျဖစ္ေသာ လာ ဇာ ဒါ အတြက္ အနည္းဆံုး ေဒၚလာ တစ္ ဘီလ်ံ ခန္႔ ရရွိရန္ ရည္ရြယ္ ထားေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္း အစီအစဥ္ကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္း ခဲ့သည္။